कुन बार के गर्दा सफलता मिल्छ ? के भन्छ ज्योतिष शास्त्र ? - कुन बार के गर्दा सफलता मिल्छ ? के भन्छ ज्योतिष शास्त्र ? -
कुन बार के गर्दा सफलता मिल्छ ? के भन्छ ज्योतिष शास्त्र ?
काठमाडौँ । दैनिक जीवनमा हामीले कैयौं संर्घष गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा केही सफलता त केही असफलता मिल्छ । तर जे काम गर्दा पनि सफलता मिलेको छैन भने ज्योतिष शास्त्रअनुसार ग्रह दोष निवारण गर्नुपर्ने ज्योतिषशास्त्रीहरु बताउँछन् ।